१ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
१ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य
उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामीकहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन् । २१ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात गरिसकेकी छिन् र अहिलेसम्म केही संख्यामा पुरुषहरुलाई आफ्नो यौनको चपेटामा पारिसकेकी छिन् ।
आफुले सेक्सलाई माया गर्ने तथा पुरुष र हँसिमजाक आफुलाई मन पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले आफुसँग सेक्स गर्ने हरेक पुरुषलाई २० मिनेटको समय दिने बताएकी छिन् । यस अर्थमा उनले १ लाख पुरुषसँग सेक्स गर्दासम्म ३३ हजार ३ सय ३३ घण्टा उनले सेक्समै बिताएकी हुनेछिन् । यसको अर्थ उनले लगातार सेक्स गरेमा पनि एक लाख जनासँग सेक्स गर्न झण्डै ४ वर्ष लाग्नेछ । उनले आफ्नो योजना पूरा गर्नका खातिर हप्ताको दुइ दिन सेक्सलाई छुट्टाएकी छिन् । २० वर्षमा १ लाख पुरुषसँग सम्भोग गर्ने लक्ष्य लिएकी उनले हरेक शनिवार र आइतबार औषतमा १४।१४ जनासँग सेक्स गर्ने योजना बनाएकी छिन् ।